Liverpool Oo Garoonka Stamford Bridge Ku Soo Dubatay Chelsea. | Somaliland Today
← Amb. Kaysar Cabdilaahi Oo Madaxweynaha Uga Mahad Celiyay Xilku U Magacaabay Ee Wasiir Ku-xigeenka Wasaarada Ganacsiga.
Wariye Qaabka U Dooda u Daadihinaayay Ay Isoo Jiidatay: Qalinkii Cabdinaasir Xasan Diiriye →
Liverpool Oo Garoonka Stamford Bridge Ku Soo Dubatay Chelsea.
(SLT-London)Kooxda Liverpool ayaa Chelsea garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dubatay kadib markii ay 3:1 ku garaacday. Inkasta oo ay Chelsea goolka ku hormartay ayay haddana Liverpool saddex gool ugu sariftay, waxaana guushan dahabiga ah Reds u horseeday Philippe Coutinho oo markii ugu horaysay horyaalka Ingiriiska ka dhaliyay laba gool halka uu goolka seddexaad raacsaday Christian Benete oo ciyaarta badal ku soo galay.
Kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dhawaysay kooxda Liverpool,kulankan ayaana ahaa kulan xiiso badan oo ay arimo badani ku xeeranayeen. Chelsea iyo Liverpool ayaa labaduba kulankan guul uga baahanaa si ay sare ugu koraan kala saraynta horyaalka Ingiriiska basle sidoo kale kulankan ayaa Mourinho u ahaa kulan uu ku badbaadsan karo shaqadiisa Blues.
Shaxaha ay labada tababare ee Mourinho iyo Klopp kulankan la soo shirtageen:-
Chelsea : Begovic, Zouma, Cahill, Terry, Azpilicueta, Mikel, Ramires, Willian, Oscar, Hazard, Diego Costa
Chelsea: Amelia, Baba, Matic, Fabregas, Kenedy, Falcao, Remy
Liverpool: Bogdan, Lovren, Benteke, Allen, Ibe, Teixeira, Randall
Xamaasada uu kulankani ku bilawday ayaad ka fahmi karaysay muhiimada uu leeyahay, ciyaarta ayaan noqon mid laka cabsooday waxayna markiiba labada kooxood bilaabeen in ay weeraro isku qaadaan taas oo keentay in daqiiqadii 4 aadba ay Chelsea hogaanka ciyaarta la wareegto kadib markii uu Ramires gool qurux badan oo madax ah ku dhaliyay goolka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Blues hogaanka si deg deg ah ugula wareegtay.
Cesar Azpilicueta ayaa kubbad fiican ka soo karoosay dhinaca bidix waxaana isaga oo duula difaacyada Liverpool kubbada ka dhex qaatay Ramires kaas oo kooxdiisa culayska ka yareeyay.Chelsea ayaa u muuqatay in ay kulankan ka go’an tahay in ay guul ka gaadho Liverpool isla markaana ay macalinkooda u hiiliyaan inkasta oo ay Liverpool ay iyaduna abuuraysay fursado badan.
Goolhaye Simon Mignolet ayaan helin fursad uu goolkan iskaga badbaadin karo. Ramires oo shalay heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Blues ayaa heshiis kordhintiisa ugu dabaal degay goolkan balse Mourinho ayaan wax dabaal deg ah samayn, laakiin Mourinho ayay farxad u ahayd in kooxdiisu ay xili hore shabaqa soo taabato si ay culays u saarto Liverpool.
Markii goolka looga hormaray ayay Liverpool bilawday in ay weeraro halis ah ku bilawdo goolka iyo difaaca Blues kadib fursad abuuris iyo weerar joogto ah daqiiqadii 26 aad ayay Liverpool u dhawaatay in ay barbaraha la timaado kadib markii uu Adam Lallana ka faa’iidayn gaadhay kubbad uu James Milner si fiican u soo dhex dhigay xerada ganaaxa Blues balse goolhaye Begovic ayaa badbaadin fiican sameeyay.
Daqiiqadii 35 aad ayay Liverpool ku dooday in ay rekoodhe heshay kadib markii Clyne kubbad uu fiican soo karoosay isla markaana uu John Terry ku joojiyay gacantiisa midig basle garsooraha ayaan waxba tilmaamin inkasta oo ay ahayd gacan cadaan ah.
Chelsea ayaa difaac gashay isla markaana weerar deg deg ah ku qaadaysay goolka Liverpool. kooxda martida ahayd ee Reds ayaa wax kasta garoonka ka samaysay basle difaaca Blues ayaa ahaa kuwo aan la jabin karin balse ugu danbayn dhamaadkii qaybta hore ee ciyaarta ayay Liverpool nasiibkeedu yihid kadib markii uu Philippe Coutinho kooxdiisa udhaliyay gool cajiib ah sidaana uu ciyaarta kaga dhigay barbaro 1:1 ah.
James Milner ayaa kubbad fiican la soo ciyaaray Roberto Firmino kaas oo isaguna markiiba kubbada u sii dhiibtay Philippe Coutinho kaas oo marka hore dhulka seexiyay Ramires ka hor intii aanu kubbad wareegaysa ku darbayn lugtiisa bidix. Goolhaye Begovic ayaan fursad u helin in uu darbada Coutinho badbaadiyo waxayna Liverpool heshay goolka ay dadaalka badan u soo gashay.
Qaybta hore ee ciyaarta ayay Liverpool ahayd kooxda gacanta sare lahayd sida ka muuqata xogta kulankan laga ururiyay. Chelsea ayaa qaybta hore samaysay hal bartilmaameed oo kaliya kaas oo uu Ramires goolka ku dhaliyay halka ay Liverpool samaysay 4 darbooyin oo goolka Blues ah. Sidoo kale Liverpool ayaa boosishanka ku haysay boqolkiiba 64% halka Chelsea ay ka lahayd boqolkiiba 36%.
Halkan kaga bogo xogta qaybta hore ee ciyaarta lagaga ururiyay iyo koox kastaaba wixii ay ka heshay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Liverpool soo laabatay iyad oo ku socota dardar xoogan waxyana markiiba heshay fursado xidhiidh ah iyada oo Cahill uu fursad halis ahayd oo koorne laga soo tuuray uu dirqi iskaga saaray.
Daqiiqadii 59 aad ayuu Mourinho badal ku saaray Eden Hazard oo aan kulankan saamayn badan ku yeelan wuxuuna soo galiyay Kennedy oo markiiba ciyaarta isbadal ku sameeyay. sidoo kale Klopp ayaa kaga jawaabay in uu James Milner ciyaarta ka saaro isla markaana uu kursiga kaydka ka soo kiciyo Christian Benteke. Daqiiqadii 68 aad ayuu Mourinho ku dooday in kaadhka cas loo taago Lucas kaas oo isaga oo kaadhka digniinta ah haysatay qalad ku galay Ramires laakiin garsooraha ayaan waxba tilmaamin.
Daqiiqadii 72 aad ayay Chelsea u muuqatay in ay goolkeeda labaad heshay kadib markii uu Oscar darbo aan caadi ahayn garoonka badhtanbkiisa uu kaga tuuray goolka Liverpool laakiin goolkan oo hubaashii uu tartami lahaa goolka xili ciyaareedka ayuu goolhaye Simon Mignolet dirqi iskaga saaray isaga oo koorne isku saaray.Deigo Costa iyo Martin Skertel ayaa markale umuuqday kuwo ku siganayay in ay dagaalamaan iyada oo Costa uu feedhaha lugtiisa kaga qabtay Skertel basle garsooraha ayaan waxba tilmaamin.
Chelsea ayaa qaybta danbe u muuqatay in ay culays badan saarayso kooxda Liverpool balse fursado badan oo ay abuurtay ayaan noqon kuwo natiijada ciyaarta waxka badalay. Laakiin daqiiqadii 74 aad ayay ciyaartu noqotay mid ay Liverpool si buuxda ugu gacan sarayso kadib markii uu Philippe Coutinho markale dhaliyay goolkiisa labaad isla markaana uu Reds hoganka u dhiibay isaga oo markale gool qurux badan ka dhaliyay Begovic, waxaana goolkan caawintiisa lahaa Christian Benteke. waxayna ciyaartu noqotay 2:1 ay Liverpool markeeda hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Ciyaarta ayaa noqotay mid dhinac kaliya ka socota waxayna Liverpool sii xoojisay weerarkeeda taas oo keentay in ay daqiiqadii 83 aad la timaado goolka ay dhulka ku jiiday kooxda ay martida u ahayd ee Chelsea waxaana goolkan Liverpool u saxiixay Christian Benteke kaas oo caawin fiican ka helay Jordon Ibe, waxayna ciyaartu noqotay 3:1 ay Liverpool hogaanka ku dheeraysatay.
Jordan Ibe iyo Alberto Moreno ayaa sidoo kale helay fursado halis ah balse ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Liverpool ku gaadhay guul dahabi ah. Guuldaradan ayaa keentay in Blues ay 11 kulan ka hesho 11 dhibcood oo kaliya waxayna arintani musiibo dheeraad ah ku tahay tababare Jose Mourinho oo kulankan laga filayay in uu isbadal sameeyo.Halkan kaga bogo xogta kulankan iyo sidii ay labada kooxood kala ahaayeen.